MRB wifi footfall counter HPC015S
Sistemụ agụta mmadụ
Igwefoto na-agụ ndị mmadụ
Ọnụ ụzọ njem/MDVR
Sensọ agụta ndị bi
MRB AI Ndị mmadụ na-emegide HPC201
Ndị mmadụ MRB na-agụ igwefoto HPC008
MRB AI Sistemụ ịgụta ụgbọ ala HPC199
Sistemụ agụta ndị njem akpaghị aka maka ụgbọ ala MRB HPC088
MRB ikuku ndị mmadụ na-emegide HPC005
MRB Door ndị mmadụ na-emegide HPC001
Sistemụ mkpado ọnụahịa MRB ESL HL290
Ngwa MRB ESL
Sistemụ bọs ụgbọ ala ụlọ akwụkwọ echekwabara - MR...
Ogo kacha mma akpaaka ndị mmadụ - MRB ikuku...
Ụlọ ọrụ n'efu sample Pricer Digital Tags - MRB ESL b...
WIFI akara mgbada ụkwụ
Enwere ike iji ekwentị mkpanaaka Andriod ma ọ bụ IOS mee ntọala
Ọmarịcha arụmọrụ na gburugburu gbara ọchịchịrị
Nkwụnye na Play
Enyere protocol na API
Kwesịrị ekwesị maka Ụlọ Ahịa Chain
OEM na ODM dị
Ọtụtụ n'ime anyị counterfall counterbụ ngwaahịa ikike ikike. Iji zere mpụ, anyị etinyeghị ọtụtụ ọdịnaya na webụsaịtị. Ị nwere ike ịkpọtụrụ ndị ọrụ ahịa anyị ka ha ziga gị ozi zuru ezu gbasara anyị counterfall counter.
Anyị na-eji nke a counterfall counterihe mmetụta iji wepụta ngwa-ngwa, dị mfe ma dịkwa mma maka ọnụọgụ ọbá akwụkwọ, ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, ebe ndị mara mma, ụlọ ahịa agbụ, nnukwu ụlọ ahịa, na ebe ndị ọzọ n'ụlọ na ná mba ọzọ. Nke acounterfall counter nwekwara ike iji maka njikwa obibi akpaka.
HP015S counterfall counter bụ ultra-obere, batrị na-arụ ọrụ, WIFI na-ebufe counter eruba njem. Naanị otu ngwa ngwa nwere ike imezu ihe ndị ahịa chọrọ. Ihuenyo doro anya ma na-emelite ozugbo ozugbo. Enweghị ụgwọ ndị ọzọ achọrọ. Ị nwere ike họrọ ọnọdụ ịkparịta ụka n'Ịntanet ma ọ bụ guzoro naanị ya.
Mgbe igwe na-agụta ụkwụ na-eji usoro ịkparịta ụka n'Ịntanet, na counterfall counterna-enye WIFI-AP netwọk hotspot na arụnyere WEB ọrụ. Mgbe ijikọ na ịbanye na ikike site na ekwentị ọ bụla (Android, IOS), jiri ibe WeB ka ịtọọ paramita nke ọnụ ọgụgụ ndị njem na-erugharị ma ọ bụ chọgharịa data, ihe nkesa na-achịkọta ma na-enye akụkọ nyocha dị iche iche, na-eji sistemụ ndị ọzọ na-ebugharị. ma ọ bụ ndọtị ọrụ.
Ihe mmetụta Footfall nwere ike ịchekwa ndekọ mgbaba njem dị ka oge a kapịrị ọnụ si dị, ma bulite ndekọ mgbaba njem na sava ahọpụtara oge niile dịka oge a kapịrị ọnụ.
counter ọdịda ụkwụ na-enyekwa nkwado teknụzụ zuru oke iji nyere aka na mmepe nke abụọ, oku interface API na mmepe nke abụọ, na-enye ihe zuru oke igwe na-agụta ụkwụUsoro nzikọrịta ozi na nkwado teknụzụ metụtara ya, yana ụzọ dị iche iche nke docking data. Ikpo okwu na-eji sava ndị ọkachamara na-enye ngwa dị nro ma dị mma Ahụmahụ, ihe nkesa ndabere data nke onwe ya iji hụ na iguzosi ike n'ezi data.
Agba Oji ma ọ bụ ọcha
Njikọ Ikuku, Wifi modul nkwado
Obosara nchọpụta 1-20 mita
Batrị ruo afọ 1.5 (batrị ọkọlọtọ mba ụwa)
Ngwa ngwa Dị
Ụzọ ịlele data Mobile ma ọ bụ PC
Kedu ihe kpatara ịhọrọ counter mgbada ụkwụ MRB?
1. Dị ka mgbanwe na njem eruba data gbakọọ site counterfall counter, mpaghara pụrụ iche na oge pụrụ iche nwere ike ikpe ikpe, na njikwa ihe onwunwe, nlekọta na nchekwa nwere ike ịhazi nke ọma iji zere mfu ihe onwunwe na-enweghị isi.
2. The njem eruba na isi ebe gbakọọ site footfall sensọ na-enye ndabere sayensị maka nhazi nhazi nke mpaghara dum.
3. Site na ọnụ ọgụgụ na ntụnyere nke njem njem n'oge dị iche iche, na nkà mmụta sayensị nyochaa ezi uche nke nkwalite ahịa ọrụ atụmatụ.
4. Site na nyochaa data na counterfall counter, jiri nlezianya chọpụta ọkwa ọnụahịa nke mgbazinye ụlọ ahịa counter.
5. Dị ka ọnụ ọgụgụ nke ndị njem na-adọkpụ na mpaghara ahụ si dị, a pụrụ imezi ike ndị mmadụ n'ụzọ ziri ezi iji chịkwaa ọnụ ahịa.
6. Nye ntọala sayensị maka ịkwalite mgbasa ozi na mmefu ego nkwalite site na ọnụ ọgụgụ ndị njem njem.
7. Site na ihe mmetụta ụkwụ ụkwụ, enwere ike ịgbakọ nkezi ike mmefu nke njem njem iji nye ntụaka maka idobe ngwaahịa.
8. Site na igwe na-agụta ụkwụ, Enwere ike ịtọ awa azụmahịa n'ụzọ ziri ezi ma nwee ike ibelata ego efu.
Kedu ka counterfall counter si arụ ọrụ?
Ụkpụrụ agụta: teknụzụ nkebi, radieshon infrared.
Usoro bulite data: bulite data na sava igwe ojii site na WIFI ikuku.
Ngosipụta data: OLED nnukwu ihuenyo ngosipụta ezigbo oge nke ntinye na ọpụpụ data ụbọchị.
Ogologo nchọpụta: ime ụlọ 1-20 mita, n'èzí 1-16 mita.
Usoro agụta: enwere ike ịgụta ọnụọgụ ndị njem na mbata iche iche.
Usoro nlele data: tinye URL na ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ PC iji tinye ibe weebụ, banye na aha akaụntụ na okwuntughe ka ịlele, wee nweta data nke oge dị iche iche maka nlele.
Usoro ntinye: dozie onye na-ebugharị infrared na onye na-anata infrared n'otu elu dị n'akụkụ abụọ nke ọwa ahụ, na-ezere ihe mgbochi n'etiti, na nrụnye dị n'etiti 1.2-1.4 mita.
Ụdị inye ọkụ: ọkụ ọkụ USD, batrị lithium na-ebufe ike (enwere ike iji ya ihe dị ka ọnwa 3 mgbe ụgwọchara).
Enwere ike ịlele data ngwaọrụ nke ụlọ ahịa dị iche iche n'otu akaụntụ ahụ, jikwaa n'otu oge ahụ, enwere ike ịme ntụnyere data.
Enwere ike ịhazi njikwa obibi site na counterfall counter ngwanrọ.
HPC015S Footfall counter vidiyo
Anyị nwere ọtụtụ ụdị IR counterfall counter, 2D, 3D, AI counterfall counter, a na-enwe mgbe niile nke ga-adabara gị, biko kpọtụrụ anyị, anyị ga-akwado ihe kachasị mma counterfall counter maka gị n'ime awa 24.
Nke gara aga: MRB USB igwe na-agụta mmadụ maka ụlọ ahịa HPC015U
Osote: Ndị mmadụ dijitalụ ikuku MRB na-emegide HPC005U
Igwe mgbada ụkwụ
Igwefoto agụta ọdịda ụkwụ
Sistemụ Ngụgụ Ụkwụ
footfall ndị mmadụ counter
Ụkwụ ndị mmadụ na-agụ igwefoto
MRB akpaka ndị mmadụ counter HPC005S
MRB retail trafic counter maka ndị na-ere ahịa ọnụ ahịa...
Ndị mmadụ dijitalụ ikuku MRB na-emegide HPC005U
MRB USB igwe na-agụta mmadụ maka ụlọ ahịa HPC015U
A na-ebupụ ngwaahịa anyị na mba na mpaghara 100 n'ụlọ na mba ọzọ. Site na nkwado siri ike nke ndị ahịa anyị, MRB enweela ọganihu dị ukwuu.
Adreesị: Ụlọ 818-820, ụlọ B, St. NOAH, No. 1759, Jinshajiang Road, Putuo District, Shanghai, China.
Faksị: + 86-21-52353906